Chinese webhusaiti (inorwisa mabhakitiriya mumiririri)
Chinese webhusaiti (anti-hydrolysis mumiririri)
Chii chinonzi antibacterial isina-yakarukwa machira?
Chirwere che2020 hachina kungozivisa veruzhinji nezvinhu zvisina kurukwa, asi chakashamisawo vanhu nekushandisa kwayo uye mashandiro mumasikisi. Muchokwadi, machira asina kurukwa zvakajairika zvekurapa uye zvehutano zvekuchengetedza, uye zvine zvakakosha zvinoshandiswa mumasikisi, zvipfeko zvekudzivirira, ...
Kuzivisa: Sei mabhakitiriya zvinhu zvinogadzirwa?
ne admin pane 21-03-30
Mushure mekupararira kwedenda, ruzivo rwemunhu wese rwemaantimicrobials rwakawedzera. Mishonga inorwisa mabhakitiriya yakakurumidza kuoneka munharaunda yeruzhinji yekuona. Musimboti wezvinhu zvekurwisa mabhakitiriya iri mune zvekurwisa mabhakitiriya! Saka iyo inorwisa mabhakitiriya inogadzirwa sei? Langyi New Mate ...
Mishonga inorwisa mabhakitiriya yefoni —— kushandiswa kwakakurumbira kwepurasitiki inorwisa mabhakitiriya
Hupenyu hwedu hwezuva nezuva hwakabatana zvakanyanya nenhare mbozha. Vanhu vari kuramba vachiwedzera kuvimba nefoni. Mabhakitiriya ari pamafoni mbozha anofuratirwa nyore nyore nevanhu vazhinji. Maererano neongororo, 92% yemafoni uye 82% yevaridzi inotakura mabhakitiriya mumaoko avo. Pakati pavo, 25% ye mobi ...
Nzira shanu dzekugadzirira mapurasitiki ekurwisa mabhakitiriya
Nekukurumidza kusimukira kwehupfumi pamwe nekuenderera kuri kuwedzera kwehupenyu hwevanhu, vanhu vari kubhadhara zvakanyanya nekutarisisa kwavo kwakasununguka, hutano uye nharaunda yekugara yakachengeteka. Nekudaro, kazhinji pane huwandu hukuru hwebhakitiriya, mafuru uye kunyange hutachiona pazvinhu ...
Nyaya Yebasa | Gadzirisa dambudziko rePET monofilament hydrolysis
【Dambudziko Tsananguro】 Iyo yekuomesa firita inoshandiswa mune pepa indasitiri ndeye PET monofilament. Inoshandiswa mune yakanyanya tembiricha uye yakanyorova nharaunda kwenguva yakareba. Iyo PET firita iri nyore kune hydrolysis reaction. Kuwedzera HyMax® anti-hydrolysis mumiriri kuPET monofilament inogona kuwedzera sevhisi ...
Chii chinonzi copper ion antibacterial fiber?
Chakagadzirwa antibacterial fibers yakawedzerwa nesimbi ion antibacterial agents akakurumidza kukura mumakore achangopfuura. Iyo ine hunhu hwekuchengetedzeka kwepamusoro uye hapana kuramba kwemishonga, kunyanya yakanakisa kupisa kupisa uye kugadzikana kwemakemikari, uye kwave kushandiswa zvakanyanya mu fiber uye nedzimwe nzvimbo ...
Nzira yekugadzira sirivheri inorwisa utachiona jira?
Sirivheri inorwisa utachiona jira rudzi rutsva rwefibre fiber ine antimicrobial zvivakwa. Pane nzira mbiri dzekugadzira sirivheri inorwisa utachiona jira. Imwe nzira ndeyekuwedzera sirivheri ion inorwisa mabhakitiriya mumeso pamusoro pejira, uye imwe nzira ndeyekuwedzera iyo dir ...
Ko vekare vaishandisa sei sirivheri nemhangura kudzivirira hutachiona?
Munguva dzekare, kuziva kwevanhu nezvehutsanana hwezvakatipoteredza kwaive kushoma, uye kugona kwavo kudzivirira uye kuongorora zvirwere kwaive kwakaderera kwazvo. Zvirwere zvakasiyana siyana zvinokonzerwa nehutachiona hutachiona, senge cholera, tibhii, uye nemanyoka. Vanhu panguva iyoyo vaisaziva kuti chii ...
Denda rinodzokororazve, Langyi sirivheri ion inorwisa mabhakitiriya matema tekinoroji inovandudza mask kudzivirira
Munguva pfupi yapfuura, iyo nyowani korona denda yakaratidza maitiro ekudzokazve kuChina. Sezvo hurumende dzenzvimbo dzakatanga kusimbisa kudzivirira uye kudzora denda, vanhu vakavandudza tarisiro yavo kuzvichengetedza. Kupfeka mamask ndiko kudzivirirwa kwakanyanya kana uchienda kunze. Masiki ave ...
Nei sirivoni ion iine anogara antibacterial mhedzisiro?
Kana maatomu esirivha akarasikirwa nemaerekitironi imwe kana anopfuura, anova maion esirivheri. Sirivha ions kazhinji ine matatu valence inoti: Ag +, Ag2 + uye Ag3 +. Sirivha ions ine yakasimba oxidizing zvivakwa uye yaishandiswa semishonga, sezvakanyorwa mune yemazuva ano pharmacopoeia. Kune mishonga mina ine sirivioni ions ...
Anti-hydrolysis mhinduro yePolyester (PET PBT)
Polyurethane mhando yepolymer zvinhu zvine zvakakosha zvivakwa. Inobatanidza mashandiro ehunhu hwezvinhu zvakasiyana kubva kumapurasitiki, elastomers kusvika kuzvipfeko, senge huwandu hwakawanda hwekuoma, simba rakakwirira, kupfeka kuramba, kunyorova kwakanaka, kupisa kwemwaranzi, uye Mhepo pe ...
Basa re anti-hydrolysis mumiririri
Mhute inokanganisa akasiyana zvimiro zvema polymers. Silica gel, yakashandurwa silica gel, kana isocyanate ichaita nemvura nekukurumidza. Naizvozvo, kuwedzera hunyoro scavenger (Mhute Scavenger) panguva yekuchengetedza kuchengetedza kugadzikana kwezvinhu zvakasvibirira zvinodiwa. Kune akaomarara uye akaumbwa ma polymers, ...
Kero: Kwete. 1 Bldg., Kwete. 188 Yonghang Rd., Songjiang Dist., Shanghai, 201699, PRC
Runhare: +86 021 6779 9029
Sirivha Ion Antibacterial Agent, Anti Virus Kuwedzera, Anti Hydrolysis chirungiso, Antibacterial Masterbatch, Mishonga inorwisa mabhakitiriya, Antibacterial Yarn,
Yemahara Mharidzo Kunyorera